Mooshin ka dhan ah Ra'iisul Wasaaraha oo baarlamaanka loo gudbiyey
November 6, 2014 (GO)- Mooshin ka dhan ah Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Shiikh Axmed Maxamed ayaa galabta loo gudbiyey guddoonka Baarlamaanka Dowlada Federaalka.
Lama oga ilaa io hadda tirada rasmiga ah ee xildhibaanada saxiixay mooshinka haseyeeshee sida wararka hordhaca ah lagu helayo ku dhowaad 100 xildhibaan ayaa ogolaaday.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari wuu aqbalay mooshinka, waxayna taasi cadayn u tahay in tirada xildhibaanada soo gudbiyey gaarsiisan tahay inta sharcigu ogolaanayo inay mooshin keeni karaan.
Mooshinka la doonayo in lagu majaxaabiyo Ra'iisul Wasaaraha oo bilihii u dambeeyey qorshihiisu soo socdey, waxaa dabada ka riixaya Madaxweynaha iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada.
Dhanka kale Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa isla galabta u duulay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, halkaasoo uu kaga qayb geli doono shir madaxda dalalka ku jira urur goboleedka IGAD yeelanayaan.
Biishii December ee sanadkii hore 2013, waxaa mooshin kan oo kale ah kalsoonida loogala laabtay xukuumaddii uu hogaaminayey Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Arintan ayaa kusoo aadeysa maalmo kadib markii Ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka inay khilaafka jira dhex dhexaad ka noqdaan, maadaama laga warhelay in qaar badan oo xildhibaanada kamid ah la laaluushay.
Qoor-qoor oo soo saarey digniin la xiriirta shirka Dhuusamareeb 3 10.08.2020. 00:25
Puntland oo u hanjabtay telefishin ka faafiyey "warar sumcad dil ah" 09.08.2020. 20:05
DF oo wareejisay tacliinta Banaadir xilli ay faragelin ku hayso maamulada 09.08.2020. 18:50
Wasiir isu casilay carada ka dhalatay qaraxyadii ruxay caasimada Lubnaan 09.08.2020. 15:25
Mudada lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo la saadaaliyey 09.08.2020. 15:00
Deni oo ka hadlay geerida marxuum Cismaan Cumar Maxamed 09.08.2020. 12:23